किन कड्किए आईजिपी खनाल ?
काठमाडौं । पछिल्लो ३ हप्तामा १५ जना प्रहरी भ्रष्टाचारको अभियोगमा रंगेहात समातिएपछि प्रहरी प्रशासन ठूलो दबावमा परेको छ ।
व्यापारीहरुलाई धम्क्याएर तथा अवैध कारोबारमा साथ दिंदै पैसा कमाउने दाउमा लागेपछि नेपाल प्रहरी विवादित हुँदै गएको हो । त्यसमाथि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को भातृ संगठनले आईजिपी हटाउन माग गर्दै गृहमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्रनै बुझाएपछि तनावमा रहेका महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल आइतबार राष्ट्रिय प्रहरी प्रतिष्ठानमा आयोजित कार्यक्रममा अनैतिक काममा संलग्न प्रहरीलाई कारबाही गर्ने भन्दै कड्किए ।
उक्त कार्यक्रममा बोल्दै खनालले भने, ‘केही प्रहरीको गैरव्यवसायिक कार्यले नेपाल प्रहरीको छविलाई नकारात्मक असर पारेको छ । त्यस्ता प्रहरीले आफ्नो गलत कर्मको मूल्य चुकाउनु पर्छ । ’ उनले दोषी देखिएका प्रहरीलाई विभागिय कारबाही अथवा कानूनी कारबाही नै हुने पनि बताएका छन् ।
२०७५ असोज २२ सोमबार २०:०४:०० मा प्रकाशित
बाबुरामको ऐंसेलु मोह
काठमाडौं, ५ जेठ । राजनीतिक दल परिवर्तनमा निकै चञ्चल नेताको पहिचान बनाईरहेका पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई अहिले गृहजिल्ला गोरखा पुगेका छन्
काठमाडौं । तपाइँले मोटरसाइकलको चाबी लगाउन भुल्नु भएको त छैन ? चाबी लगाए पनि ह्याण्डिल बन्द गर्न पो बिर्सनु भयो कि ? या असुरक्षित ठाउँमा पार्किङ गर्नु
डोटी, ३१ वैशाख । जिल्लाको दिपायल सिलगढी नगरपालिका–८ लडागडामा गएको तीन वर्षको अवधिमा १६३ बालविवाह भएको एक संस्थाको तथ्याङ्कले देखाएको छ । जिल्लामा
अवैध व्यवसायमा संलग्न एकदर्जन भारतीय याक एण्ड यति होटलबाट पक्राउ
काठमाडौं । अवैध व्यवसाय संचालन गर्न नेपाली युवालाई तालिम दिन आएका भारतीय व्यवसायलाई प्रहरीले एक पाँचतारे होटलबाट नियन्त्रणमा लिएको छ । नेपालमा